Alshabaab oo Sheegatay Masuuliyadda Qaraxii iyo Weerarkii Ka Dhacay Hotel Naasa-Hablood | SAHAN ONLINE
Alshabaab oo Sheegatay Masuuliyadda Qaraxii iyo Weerarkii Ka Dhacay Hotel Naasa-Hablood
Muqdisho;-Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay qaraxyo iyo weerar xigay oo Maleeshiyaadka Alshabaab ay la beegsadeen caawa hotel Naaso-hablood 2 oo ku yaal xaafadda Xamar weyn ee wadnaha caasimadda Muqdisho. weerarkaasi waxaa sheegatay masuuliyadeeda ururka Al-shabaab
Wararku waxay sheegayaan in weerarkaasi ay ku dhinteen dad isugu jira shacab, siyaasiyiin iyo saraakiil booliis, waxaana loo adeegsaday gaari bambaano lasoo saaray oo lagu weerara Hotelka. Qaraxaasi waxaa xigay koox hubaysan oo gudaha u galay Hotelka.
Suxufi ka tirsan Idaacada Kulmiye oo goobta qaraxu ka dhacay tegay ayaa sheegay inuu indhihiisa ku arkay Meydadka illaa 10 Qof oo Shacab ah oo ku dhintay Qaraxa islamarkaana ay ku jiraan kuwo Saarnaa Gaadiid Goobta marayay.Goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sidoo kale laga daadgureeyay Dhaawacyo gaaraya ilaa 15 Qof oo ay qaadeen Gaadiidka Gurmadka deg dega ah.Waxaana weli Hotelka laga Maqlayaa Rasaas ka dhaceysa,iyadoo Ciidamada Ammaanka ay xireen Goobta uu Qaraxu ka dhacay.
Qarax kale ayaa sidoo kale ka dhacay Meel u dhow Taalada Daljirka Dahsoon oo aan ka fogeyn Hotelka Naasa-hablood 2 ee Degmada Xamar-weyne oo qaraxa kowaad iyo weerarka xigay uu ka dhacay.
Qaraxyada iyo weerarka ayaa ku soo beegmaya iyadoo magaaladda Muqdisho uu ka socdo shir hordhac ah oo ay yeelanayaan Madaxda federaalka iyo maamul goboleeyada dalka, kaasi oo lagu xalinayo khilaafka soo kala dhexgalay iyo waliba sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka Al Shabaab kadib weerarkii 14kii Oktoober.